OPPO dia hivarotra finday any Espana amin'ny fomba ofisialy amin'ity fahavaratra ity | Androidsis
Eder Ferreño | | Finday, About us
2017 dia namela anay ny fahatongavan'i Xiaomi tany Espana. Ny marika sinoa malaza dia nanokatra ny magazay voalohany teto amintsika, nitondra revolisiona kely ho an'ny tsenan-telefaona. Fanapahan-kevitra izay nandeha tsara ho azy ireo ary mampanantena izy ireo fa hametraka ny tenany ho iray amin'ireo marika amidy indrindra eo amin'ny tsenam-pirenena. Saingy, tsy izy ireo ihany no nahatratra ny tsena Espaniola. Nanamafy ihany koa ny OPPO fa tonga tamin'ny taona 2018 izy ireo.
Ny fahitana ny fahombiazan'ny iray amin'ireo mpifaninana lehibe aminy dia nanapa-kevitra ny hamidy any Espana ilay marika sinoa. Ka amin'ity taona ity dia antenaina hahatratra ny tsena nasionaly ny OPPO. Efa nanamafy izany ny orinasa ary nanome daty izy ireo.
OPPO dia hipetraka amin'ity taona ity amin'ny tsena eropeana telo: Espana, Frantsa ary Italia. Amin'izany fomba izany dia hanaraka ny dian'ny Xiaomi ny orinasa, mivarotra ny fitaovany amin'ny fomba ofisialy any amin'ireo firenena ireo. Fa inona no afaka ho mora kokoa ny mividy finday an'ny marika ankehitriny.
Ny fahatongavan'ilay marika eto amintsika dia voalahatra amin'ity fahavaratra ity. Ho fanampin'izay, dia toa hanararaotra ny fanavaozana ny katalaogin-telefaonany ny OPPO mba hidirany amin'ny tsena eto amintsika. Ny fitaovan'ny marika dia antenaina amidio amina magazay toa ny Carrefour na MediaMarkt, ho fanampin'ireo mpandraharaha manan-danja indrindra. Na dia mbola tsy nanakatona ireo fifanarahana ireo aza ny OPPO.
Amin'izay mba ny antsipiriany bebe kokoa dia ho fantatra momba ny fifanarahana izay hikatonan'ny orinasa amin'ny herinandro ho avy. Saingy, efa ofisialy ny fahatongavan'ilay orinasa eo amin'ny tsena nasionaly. Mandeha ny resaka fa voafidy ny volana Jona. Na dia milaza aza ny haino aman-jery hafa fa amin'ny fahavaratra izany.
Na izany aza, misy volana vitsivitsy hanatanterahana azy. Ny fividianana telefaona OPPO dia ho mora kokoa eto amintsika. Satria izy ireo dia ho hita amin'ny fivarotana maro. Ahoana ny hevitrao momba ny marika tonga any Espana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Hanomboka hivarotra finday any Espana ny OPPO amin'ity fahavaratra ity
Ny LG Q6 Plus sy Q6 Alfa dia efa amidy any Espana